Maxkamadda Ciidamada Oo Ridday Xukun – Goobjoog News
Maxkamadda Ciidamada Oo Ridday Xukun
Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Daawle ayaa loo heystaa kamid ahaanshiyaha dagaalyahanada Alshabaab gaar ahaan in uu kamid ahaa dagaalamayaasha sida kediska ah u weerarta fariisimaha Ciidamada dowladda federaalka.
26-kii September 2019 ayaa laga soo qabtay Baladul-Amiin isaga oo dhaawac ah, waxa ayna ciidamada xoogga ku wareejiyeen ciidamada Amniga oo iyagana la tacaalay dhaawac kasoo gaaray dagaal Al shabaab iyo ciidanka Dowladda u dhaxeeyay.
Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Dawaale ayaa waayay mid kamid ah lugihiisa oo ay ka fursan waayay howlwadeenada caafimaad in laga jaro
Caafimaad kadib ayaa markale loo gacan geliyay hey’adaha baarista, waxa ayna baaritaan dheer kadib ku wareejiyeen Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida horraantii November sanadkii hore.
Xafiiska xeer ilaalinta ayaa isku howlay baarista kiiskan markiisii hore ka soo galay hey’adaha Amniga, waxa ayna 3-dii February sanadkan dalbadeen in la muddeeyo dhageysiga dacwad ka dhan ah Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Daawle.
Maxkamadda ayaa go’aamisay 17-kii February in la galo dhageysiga dacwadda ka dhan ah Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Daawle, Xafiiska Xeer Ilaalinta oo isaga iska leh fursadda hore ee hab raaca dacwadda ayaa Garsoorayaasha u sheegay in Eedeysanaha la soo qabtay isaga oo dagaal ku jira, waxa ay intaas ku dareen in uu ka qeyb galay weeraro kale oo ka kala dhacay Bariire, Buulo Mareer, Baraawe, Golweyn laga soo bilaawo xilligii uu Al shabaab kaga biiray degmada Walla-weyn ee gobalka Shabeellada Hoose sanadkii 2010 .
Eedeysanaha oo fursad loo siiyay in uu ka hor hadlo Garsoorka ayaa Maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadama ay ku biirista Alshabaab uusan diidaneen.
Qareenka Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Daawle ayaa Maxkamadda ka hor sheegay in Eedeysanaha uu aad u yaraa xilligii uu Alshabaab ku biirayay, sidaas darteed ayuu garoosrayaasha weydiistay in loo fiiriyo qodobada fududeyn karo ciqaabtiisa.
Garsoorayaasha ayaaa ugu dambeyn go’aan ku gaaray Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Daawle lagu xukumo xabsi daa’in sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Xukunsanaha ayaa heysta fursad kale oo uu ku dalban karo Rafcaan muddo ku siman 30-cisho xukunka kadib.
Madaxweyne Deni Oo Ka Hadlay Ujeedka Safarkiisa Imaaraadka
Isbitaalka Cadaado Oo Lagaarsiiyay Deeq Dawo Ah
Znknol hzjbwn cheap generic viagra online cialis 20 mg price
Xajhrz dijpci Buy cialis online cheap online canadian pharmacy
Lfwfic hydedo Pfizer viagra 50 mg online canada pharmacy
Fsewip zhmlcu sildenafil citrate 20 mg
cialis low price buy tadalafil online
https://okpharmp.com/ 5mg cialis canadian pharmacy
Vmtckb vuyhvp tadalafil generic coupon Ohrtx
Xozhdu uijbkv cialis 10 mg tablet cost Ridhp
Efxcks acfkqx cialis 40 mg canada Whatx
Cxetfb rrqfqw cialis pharmacy online Jmxsr
Rokpvs jdziaj free slots online Vjhvy
Zlastd nusgew fake essay writer Koqfe
on line pharmacy drug rx online pharmacy viagra
drugs from canada drugstore 24 hours pharmacy
Ojxjkh vmbkff easy essay help Buqhg
ed meds cheap viagra online canadian pharmacy drugstore cowboy
Svqzby xrtznf cheapest generic cialis Rbngy
Wgvank wqlmyv canadian online pharmacy Jkpoe
cialis (generic) п»їcialis cialis with daproxene [url=http://21cialismen.com/]cialis reviews patients[/url] ’
viagra paypal viagra sale viagra natural para hombres [url=http://llviabest.com/]viagra side effects on teenagers[/url] ’
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland oo Ciidamo Geysay Goobihii lagu Muransanaa ee Diiwaangelinta Lughaya
viagra cheap fast shipping viagra trial packs without prescr...
back pain from cialis cialis with dapoxetine buy order ciali...
cialis and high blood pressure discount cialis online cialis...
viagra with dapoxetine without a prescription viagra sale vi...
prilosec 10 mg united states prilosec online prilosec online...